अस्पतालकै गलत सूचनाले ‘गुल्मीका कोरोना संक्रमितको मृत्यु’ को हल्ला – Health Post Nepal
२०७७ जेठ ७ गते १५:३७
बुधबार बिहानै धेरै सञ्चारमाध्यममा एउटा खबर फैलियो ‘गुल्मीका कोरोना संक्रमितको मृत्यु’। तर केहीबेरपछि अस्पतालले विज्ञप्ती निकालेर भन्यो ‘उहाँको उपचार भइरहेको छ। मृत्युको खबर हल्लामात्रै हो।’
तर यो सूचना सिधै पत्रकारले आफैं सार्वजनिक गरेका थिएनन्। अस्पतालले नै गलत सूचना बाहिर चुहाएको थियो। सुरुमा अस्पतालका व्यक्तिहरुले सरकारी निकाय र मिडियालाई गलत सूचना दिएको थियो।
सरकारी निकायलाई अस्पतालबाटै फोन गरेर जानकारी गराइएको थियो भने सञ्चारकर्मीको जिज्ञासमा उनीहरुले मृत्यु भएको पुष्टि गरेका थिए।
अस्पताल प्रशासनले भने बुधबार अपरान्ह विज्ञप्ती निकाली समाचार गलत भएको बताएको छ। अस्पतालले भेन्टिलेटरको सर्पोटमा उपचार भैरहेको र निजको अवस्था गम्भीर रहेको जनाएको छ।
यसरी दिइएको सूचना फेरिएपछि मृतकको बिषयमा आएको समाचारको बिषय विवादित बनेको छ भने उपचाररत बिरामीको बिषयमा पनि शंका उपशंका उत्पन्न भएको।
बुधबार बिहान अस्पतालका अधिकारीबाट ‘उहाँको मृत्यु भयो, शब व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? भन्दै प्रदेश ५ को स्वास्थ्य निर्देशनालयलाई फोन मार्फत जानकारी गराइएको थियो। त्यसपछि स्वास्थ्य निर्देशनालयले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत शब उठाउनका लागि सेनासम्मलाई खबर पुर्याउने प्रक्रिया सुरु गरिएको थियो।
पछि बिरामीको मृत्युको बिषय फेरिएको खबर आएपछि मन्त्री बरालले अस्पतालका अध्यक्ष चिन्तामणी पाण्डेलाई फोन गरी यथार्थ जानकारी मागेका थिए। मन्त्री पाण्डेले अस्पतालबाट गलत सूचना भएको भन्दै क्षमा याचना गरेका छन्।
सामाजिक विकास मन्त्री बरालले निर्देशनालयमार्फत जानकारी पाएपछि मातहतका निकायलाई काम अगाडी बढाउन निर्देशन दिएका थिए। मृत्यु भएको जानकारी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसम्म पुगेको थियो । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले समेत गुल्मीका संक्रमितको मृत्यु भएको कुरा मिडिया समक्ष पुष्टि गरेका थिए।
अस्पतालका अध्यक्ष पाण्डेले पनि मन्त्री बरालले आफूलाई त्यसबारेमा फोन गरेको पुष्टि गरेका छन्। ‘उहाँले तपाईको पूर्व अध्यक्षले मृत्यु भएको भनेर हामीलाई खबर गर्ने, अहिले कुरा अर्कै छ’ भनेर सोधेको अध्यक्ष पाण्डेले बताए।
उनले मन्त्रीलाई बिरामी उपचार भैरहेको छ भनि जानकारी गराएको र अस्पतालबाट सूचना दिने क्रममा त्यस्तो गल्ती भएको भए क्षमा चाहन्छु भनेर भनेको वर्तमान अध्यक्ष पाण्डेले बताए।
त्यसैगरी तिलोत्तमा नगरपालिकाका मेयर बासुदेव घिमिरेलाई पनि अस्पतालकै व्यक्तिबाट मृत्यु भएको खबर पुगेको थियो। मृत्युको खबर दिने व्यक्तिलाइ पुष्टिका लागि फोन गरेर बुझ्दा समेत मृत्यु भएको जानकारी पाएको तिलोत्तमामा मेयर बासुदेव घिमीरेले बताए।
त्यसको आधारमा आफुले मिडियालाई जानकारी दिएको उनको भनाई छ। त्यसपछि पुनः प्रदेश ५ को स्वास्थ्य निर्देशनालयले फोन गरी अस्पताल प्रशासनलाई यथार्थ कुरा बाहिर ल्याउनका लागि चेतावनी दिएपछि अस्पतालले विज्ञप्ती निकालेको थियो।
प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका डा. विनोद कुमार गिरीले संचार माध्यममा आएको फरक फरक समाचारको आधिकारीता के हो ? भनि अस्पताल प्रशासनलाई पुष्टि गर्नका लागि निर्देशन दिएको बताए।
‘अस्पतालको विज्ञप्ती हाम्रै पहलमा आएको हो’ डा. गिरीले भने, ‘अहिलेलाई अस्पतालकै विज्ञप्तीलाई आधिकारीक मान्नुस्।’